Isihluzi seZindlu esiCoca abavelisi kunye nabaxhasi - China Isihluzi seZindlu sefektri
Uchungechunge lwe-QDY / QDK lwezihluzi zentsimbi ezingenasici zii-304 okanye i-316L zeefilitha zensimbi ezingenasici, zine-desig efanelekileyo, ubumbeko lwendalo kunye nemilo entle, kwaye inokususa i-faceplate, ayinayo i-engile efileyo, ukucoca ukufakela kulula kwaye kulula. Umphezulu wangaphakathi ucocwe kakuhle, uhlangabezana neemfuno zenqanaba lezempilo kwaye uhambelane nomgangatho we-GMP. Iifilitha ze-QDY / QDK zisetyenziswa kakhulu kwezamayeza, ukutya, ishishini lamachiza, elektroniki, kunye nakumashishini okhuselo lokusingqongileyo. Iifilitha ze-QDY luchungechunge lokucoca ulwelo kunye neefilitha zeQDK luchungechunge lokucoca igesi.
Uhlobo lwebhatyi sombane wesiFudumezi
Ukuhlangabezana neemfuno ze-GMP entsha, ke i-R & D kunye noyilo lwe-NEH yohlobo lwejacket heater ye-elektroniki, isixhobo senziwe ngezinto eziphezulu zokufudumeza kunye neyunithi yolawulo. Isetyenziswe ngokubanzi kwi-biotechnology, kwishishini lokuxuba amayeza nakwizinto ze-elektroniki, kufezekisiwe izibonelelo ezilungileyo zentlalo nezoqoqosho.
I-TC Series izindlu zokucoca ulwelo lwekhabhoni
Uluhlu lwe-TS lwezihluzi zentsimbi ezingenasici ziwela kwimoto emiselweyo kunye encinci. Ukucoca izindlu zineendawo ezivulekileyo eziphezulu nezisezantsi kunye nokuvula ngasekhohlo nangasekunene zimbini iintlobo. Iikhatriji zisebenzisa isihluzi sesitered sintered, izihlanganisi eziqhelekileyo zinezikrufu ezingama-226 kunye nezikrufu ze-M20, iinkcukacha ezizodwa zinokwenza ngokweemfuno zabathengi ukuyila nokwenza ngokwezifiso.